Home | Fanafahana ny fanafody
Aoka ianao ho olona tena irinao!
Fitaovana feno ho an'ny fivoaran'ny fahatsiarovan-tena mivantana.
Tetezo amin'ny valin-dresaky ny valinteny sy ny fitondran-tena, ary ho tonga tena iza ianao.
Ny Trinite Alchemical dia kitapom-baovao vaovao fanovana fanavaozana natao hanampiana anao ho lasa olona nahazatra anao hatrizay.
Ny Trinity dia ahitana fanafodom-pifohazan'ny alikaza telo:
Blue Lotus ny fanafody
Fanafahana ilay fanafody
Fanavotana ny fanafody
Ireo fanafody telo ireo dia miara-miasa mba hanazavana izay mamatotra antsika. Ny tsirairay amin'ireo fanafody ireo dia manana anjara toerana tsy manam-paharoa mba hilalao amin'ny fanaovana tsy fifanarahana ara-tsosialy, ny modely ary ny fahatsiarovana izay mitazona antsika amin'ny finoana sy fihetsika voafetra izay tsy manompo antsika.
Tsidiho ny Fahatsiarovana
Manaiky ny fanafahana ny Remedy ny fanangonana ny tsipiriko amin'ny alalan'ity endrika ity.
Teknolojia taloha momba ny andro maoderina
Ny fanafahana dia mametraka ny fenitra ho an'ny sehatra vaovao momba ny fanamafisana ny olombelona sy ny fitaovam-pihetseham-po. Vahaolana tranainy amin'ny alchika natsangana sy nanamafy ny teknolojia maoderina vao haingana, nitondra fiainam-baovao ho fitaovana mahery vaika mahery vaika sy mahery vaika.
Ny fanafody izay mandeha ny lahateny amin'ny fahafahany manohana ny olona amin'ny fampidirana ny saina, vatana ary fanahy amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny kendrina karmika sy ny korontana ara-pihetseham-po mihoa-pampana. Ny fahazoana maimaim-poana ireo rano ireo dia manome hery iray ho an'ny hery iray hafa mba hahafahantsika rehetra ho izay tiantsika hatao hatrany am-boalohany, afaka amin'ny fahalalahana ary afaka.
Taorian'ireo fitsaboana tranainy, dia misy karazana voankazo voajanahary voajanahary, voankazo sy alimika voajanahary natao ho an'ny andro maoderina.
Ny fanafahana dia miditra amin'ny lovam-panahy taloha sy masina. Izany dia mamotika hery mahery vaika amin'ny fanadiovana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po.
Mampiray ny ranon'ny tany amin'ny alàlan'ny famelana ny fahafahana hanandrana sy hampifangaro amin'ireo rano masina eto amin'izao tontolo izao mba hampifandraisana azy rehetra.
Inona no azon'ny hafa atao amin'ny fanafahana?
Henoy izay lazain'ny hafa momba ny traikefany amin'ny Liberation. Ireo kalitao fanovàna eo amin'ny sehatra ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsehampo ary ara-panahy!
Teknolojia taloha momba ny hoavy
Ny tsiambaratelon'ny antitra, nambara.
Teknolojia ara-panahy sy alchika izay mamorona fomba vaovao hanatsarana sy hanavaozana ny fiainan'ny olona. Ny fanafahana dia mampiasa teknika vao haingana amin'ny rindrankajin'ny fahiny, izay omena ny rehetra.
mifantoka, hery ary fifandanjana
Rehefa mifantoka amin'ny fandehanana maka antitra izay nalaina avy tao amin'ny vatana isika, dia afaka mitondra ny herintsika rehetra hiasa amin'ny asa rehetra. Midika koa izany fa tsy mandany ny fotoanantsika isika amin'ny lasa na manahy momba ny ho avy. Midika izany fa tsy dia mahatsiaro ho vizana loatra ny vatantsika, mila miala sasatra koa isika rehefa mihazakazaka haingana ao anaty fialan-tsasatra.
Atsaharo ny tranainy, ataovy toerana ho an'ny vaovao
Rehefa nanadio ny fomban-drazana mahazatra isika amin'ny ankapobeny ao anatin'ny tantarantsika sy ny fahatsiarovan-tsaintsika, dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny tantara an-tsehatra ara-pihetseham-po eo amin'ny fiainantsika isika. Ny fanafahana dia manao izany amin'ny alàlan'ny fitaterana azy rehetra eny ambonin'ny habakabaka mba ho hita, tsapa ary avy eo afahana indray mandeha ary ho an'ny rehetra. Avy eo dia mety hipoitra ny fihetseham-po raha tsy misy ny adidy ara-drariny avy amin'ny lasa mba hamaliana amin'ny fomba iray manokana ary azontsika atao ny mandray anjara amin'izy ireo na tsia raha tsy misy ny fironana ho tratran'ny fandrika very.
Manana safidy haka ny lotus avy amin'ny rano isika avy eo tsy hianjera.
Miverena any an-tokantranonao
Ampifanaraho amin'ny hery ao anatin'izany dia mazava tsara ny fitarinao, ny tanjonao ary ny asa nanirahana anao eto amin'ity fiainana ity. Ny fanafahana dia manohana ny iray amin'ny fanokafana ny mason-tsivana anatiny, manamora ny fifandraisana amin'ny vondrony anatiny, mitarika ny iray amin'ny fotoana rehetra amin'ny fahabetsehan'ny habetsahana, miala voly sy fientanentanana.
Ny fanafahana anao, miandry.
Karazan-tsofina Alchemical Feno
Ny endri-tsoratra feno, voaomana tsara, alchimée ary nampiarahina amin'ny endrika, LIBERATION.
Fanamboarana alchika fahiny vita amin'ny 9 vatosoa tsirairay no nodorana tamin'ny fotoana 100 mba hanamafisana ny fahaizan'ny mpanadio sy ny karmikana lalina indrindra.
Mineraly izay manadio ny rano ary miasa toy ny ampinga elektromagnetika. Satria ny rà dia rano be dia be ary misy fiantraikany lalina eo amin'ny rà izay mitondra ny saintsika.
Ny angovo voangona sy potentina avy amin'ny afo 4 izay nirehitra tsy tapaka nandritra ny taona 50 farany. Ny afo fahadimy dia ny masoandro. Io lavenona io dia maneho ny fifantohana mivatravatra amin'ny 50 taona ny fanovana sy ny fanadiovana.
Durga vibrational feo mantra ho an'ny fanovàna sy ny fiovana, mamela ny fizotry ny zava-mitranga mba hivoatra tsara kokoa noho ny zavatra mazava
Mampiteraka ny fialan-tsasatry ny zaza kely amin'ny fifaliana tsotra amin'ny zavatra kely, ny fihetseham-pon'ny zaza mijery lolo iray vao voalohany.
Ny holatra fanentanana izay manampy amin'ny fifamatorana ireo entana rehetra, ka mitondra azy ireo ho amin'ny fampidinana sy ny fandanjana
ary bebe kokoa ...
Mamonjy ny Globe.
Famafazana fanafahana amin'ny alàlan'ny tambajotran'ny mpaninjara eo an-toerana sy maneran-tany. Mampifandray ireo hery sy rano ary olona eto an-tany amin'ny alàlan'io fitsaboana mahery vaika io.
Fanafahana ny fanafody
Tetikasa tsy miankina amin'ny rano
Ny famonoan-trosa alikaika
Fanavotana - 10ml
Lotus manga - 10ml
Fanafahana - 10ml
Fahalalahana ara-pitsaboana fanafahana
© Copyright 2018 Zo rehetra voatokana amin'ny fanafahanatheRemedy.com Ny fanambarana momba ity tranokala ity dia tsy nojerena ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina. Izay vokatra resahina na havoaka dia tsy natao hanaovana diagnostika, hitsaboana, hanasitranana na hisorohana aretina. Ny valim-panadihadiana dia tsy mahazatra. Mety ho nahazo mari-pankasitrahana fanomezana ireo mpanjifa taorian'ny fandefasana ny fijoroany ho vavolombelona. Raha bevohoka ianao, mampinono, maka fanafody, na manana marary, manatona ny dokotera alohan'ny hampiasana sakafo fanampiny. ^ Ny tolotra navoaka eto amin'ity tranonkala ity, anisan'izany ny drafitra AutoShip, dia manan-kery ho an'ny mpanjifa mpivarotra ihany, fa tsy praktisiana na mpivarotra. Ny tolotra fandefasana maimaim-poana ihany no manan-danja ho an'ny mpanjifa amerikana fotsiny.